Miloko marevaka mahafatifaty mavomavo sombin-tsakafo iray zazavavy milomano |
Akanjo anaty zaza
Akanjo fitondra vehivavy
Akanjo palitao ho an'ny lehilahy
Akanjo fitondra zaza
Akanjo Yoga Womens
Fihetsiketsehana mahatsikaiky fahavaratra mitia eo alohan'ny mavo iray ...
Malalaka avo tapaka tongotra cheeky seza rakotra iray Piece B ...
Sexy V vozony eo an-tampon-tsoroka mamatotra tapa-damba iray ...
Milahatra feno vehivavy milomano haingon-damba vita amin'ny tapany roa ...
Miloko marevaka miloko marevaka miloko mavo mahafinaritra ...
UPF50 + Fandroana zaza tsy mety ririnina tsy azo tanterahina ...
Ankizy roa vavy bikini manao akanjo milomano manomboka amin'ny 2 ...
Fahavaratra 90-120cm Rivotra ara-tontolo iainana azo iverenana B ...
Miloko marevaka mahafatifaty mavomavo sombin-tsakafo iray zazavavy milomano
Type: Swimsuit Ankizy Ankizy
Item:fanao akanjo ba natao ho an'ny ankizy ny akanjo ba akanjo ba akanjo iray
endri-javatra:Malemy, mahazo aina, maina haingana, tsy misy poizina
Fabric: Nylon 82%, elastane 18% na namboarina, mahazaka klôro sy UV mahatohitra.
Karazan-tsakafo: Serivisy OEM.
mamaritra: Volavola namboarina.
Color: Safidy maro loko, azo namboarina ho Pantone No.
Ampiasao: Akanjo lomano
Ny akanjo fitondra milomano zazavavinay rehetra dia vita amin'ny lamba avo lenta ary nilahatra teo anoloana sy tao aoriany. Ny dian-tananay dia hita amin'ny vatana maro imbetsaka miaraka amin'ny safidy fandroana safidy 1-PC na 2-PC dia mety ho an'ny mpilomano mahazatra. Hita amin'ny haben'ny zazavavy rehetra 2 hatramin'ny 14 ka ny rahavavy dia afaka mahatratra ny seho amoron-dranomasina amin'ny maha ekipa anao azy ireo.
Latabatra amin'ny habe
Size tratra andilany Manomeza haavony
S 46-52CM 44-50CM 80-100CM
M 50-60CM 48-58CM 95-115CM
L 54-64CM 52-62CM 110-130CM
XL 58-68CM 56-66CM 125-140CM
XXL 62-72CM 60-70CM 140-150CM
XXXL 66-76CM 64-74CM 150-160CM
Ny fandrefesana amin'ny tanana dia hanana 2-3cm tsy mitovy.
Loko tsara tarehy, akanjo tsara tarehy, mety tsara. NAOTY: Rehefa avy nandinika ireo hevitra mety mifandraika amin'ity marika ity aho dia nanafatra habe iray avy amin'ny habeny mahazatra, ary mety tsara (somary malalaka ihany). Mariho fa somary manify ilay mitafy.
Io no akanjo milomano tsara indrindra hitantsika. Ny loko dia mazava kokoa noho ny eo amin'ny sary. Ny lafatra koa dia tonga lafatra ary tsy tery loatra na mahia mihintsy.
1. OEM, famolavolana ODM dia tsara ho an'ny akanjo milomano. Azonay atao pirinty ny sary famantarana ny volavolanao. Azonao atao ny manafatra ny volavolainay. Azonao atao ihany koa ny mandefa ny sarinao maodely manokana. Afaka natao ho anao izahay. TSY voafetra ny MOQ. Ny isa rehetra dia raisina an-tanan-droa. Ny fanaovana akanjo milomano namboarina no mahafinaritra anay.
2. Afaka manao pirinty pirinty sy fanonta sublimation nomerika ho anao izahay. Aza misalasala mandefa ny volavolanao.
3. Ny loko rehetra dia mety. Afaka mandoko ny lamba ho anao izahay.
4. Ny MOQ dia mazàna 100pcs. Nefa afaka manao habetsahana izahay.
5. Ny vidiny no olana indrindra amin'ny mpanjifa tsirairay.Raha te hahafantatra ny vidiny ianao dia mila mahafantatra ity masontsivana manaraka ity, fomba fitafiana, kojakoja fitafiana, fomba fanontana, lamina, lamba lamba, kalitaon'ny akanjo, daty ny fandefasana sns. Ireto no antony lehibe indrindra hanapahana hevitra ny vidiny. Arakaraka ny andoavanao, ny vidiny ambany azonao.
Previous: UPF50 + Akanjo fandroana zaza an-taonan'ny zaza tsy ampy taona mety ho an'ny beach
Manaraka: 100% Nylon vita printy Swiming Mens Swim Shorts ho an'ny pataloha fohy
Sombin-tsoroka manify iray, Sequin Beach ...
Sombin-javatra roa zazavavy Bikini mametraka akanjo milomano F ...
Ankizy telozoro telozoro miloko marefo ...
UPF50 + Breathable tantera-drano zaza tsy ampy taona ...
Hafainganam-pandeha maina fohy miaina 2-12 taona ankizy B ...
Ankizivavy kely tsy misy poizina mahafatifaty mandro ho an'ny ...